गेटा मेडिकल कलेज : भौतिक संरचना तयार भयो, सञ्चालन मोडेल बनेन « Anumodan National Daily
By : -मुकेश टेंर्रा/शेरबहादुर ऐर
प्रकाशित मिति : ३० भाद्र २०७८, बुधबार २२:१४
– शिक्षा क्षेत्रका अगुवा भन्छन् : मेडिकल विश्वविद्यालय
– स्वास्थ्य अधिकारीहरुको : सुझाव– स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
– कोही भन्छन्– सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेज हुनुपर्छ
– जनप्रतिनिधि भन्छन्– छिटो सञ्चालनमा ल्याऊ
धनगढी / कैलालीको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ५ गेटास्थित मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न अझै मोडल तयार हुनसकेको छैन ।
बहुप्रतिक्षित मेडिकल कलेजको भौतिक पूर्वाधार संरचना निर्माण भने लगभग सकिएको छ । मेडिकल कलेजका दुई वटा अस्पताल भवन र दुई वटा कलेज भवन निर्माण भइसकेका छन् ।
त्यस्तै आठ वटा निवास भवन, एउटा कार्यालय भवन सहित २५ वटा भवन निर्माण भइसकेका छन्् । कलेज वरिपरि पर्खाल, केही निवास भवन र मुख्यद्वारको निर्माण कार्य जारी छ । त्यस्तै तटबन्ध कार्य पनि भइरहेको छ ।
गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास कार्यकारी समितिका निर्देशक भीमबहादुर साउदका अनुसार शुरुमा साढे आठ अर्ब रुपैयाँ लागतमा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने लागत स्टिमेट रहेको हालसम्म साढे चार अर्ब रुपैया बढी लगानी भइसकेको छ ।
कार्यकारी निर्देशक साउ“दले फर्निचर जडानका लागि टेण्डर स्वीकृत भइसकेको बताए । त्यस्तै, केही दिनभित्रै विद्युत जडानका लागि पनि टेण्डर स्वीकृत प्रक्रियामा रहेको छ ।
उनले भने– फोहोर व्यवस्थापन र पानीको व्यवस्थाका लागि एक महिनाभित्रै टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइने छ । अब करिब एक वर्षभित्रै सबै आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण भइसक्ने छन् ।
उनले मेडिकल उपकरणहरू जडानको लागि नक्सा डिजाईन सम्बन्धी काम भइरहेको बताए । उनले भने– डिजाइन स्वीकृत भएपछि टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण विकास समितिले २०७९ सालदेखि पठनपाठन शुरु गर्नेगरी भौतिक संरचना निर्माण गरिरहेको जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत समिति गठन भई भौतिक संरचना, जनशक्ति, उपकरण लगायतमा करिब १५ अर्ब रुपैयाँमा कजेल सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
तर, अहिलेसम्म कजेल सञ्चालनको मोडल भने तयार हुनसकेको छैन । संघीय शिक्षा मन्त्रालय अन्तरगत मेडिकल कलेज बनाउने अवधारणा राखेर भौतिक संरचना निर्माण पुरा हुँदै गर्दा कलेज सञ्चालन सम्बन्धी विभिन्न अवधारणाहरू आउन थालेका छन् ।
सरकारहरू परिवर्तनसंगै गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन मोडलमा पनि फरक फरक धारणा आउने गरेका छन् । पूर्ववर्ति केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि, मेडिकल कलेजको साटो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने अवधारणा ल्याइएको थियो । त्यस्तै, केही पक्षले सो मेडिकल कलेजलाई सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रुपमा राख्नुपर्ने माग पनि गर्दै आएका छन् ।
पूर्ववर्ति ओली सरकारले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने अवधारणा ल्याएसंगै यसबारे पनि निकै बहस हुँदै आएको छ । कैलाली उद्योग बाणिज्य संघले समेत गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने वा मेडिकल कलेज बनाउने अथवा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भन्ने विषयमा बहस गरिरहेको छ ।
कैलाली उद्योग बाणिज्य संघले बुधबार धनगढीमा गेटा मेडिकल कलेजलाई कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि अन्तरक्रिया आयोजना गरेको छ ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूमध्ये अधिकांसले गेटा मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालय वा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रुपमा अघि बढाउनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।
कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री लेखराज भट्टले गेटा मेडिकल कलेजलाई मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा सञ्चालन गर्न उचित हुने बताए । उनले भने– मेडिकल कलेजका लागि भौतिक संरचनाहरू तयार भइसकेका छन् । तर, तत्कालै पठनपाठन शुरु हुने अवस्था नदेखिएकोले मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा अघि बढाउन गृहकार्य भइरहेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारीहरूले पनि गेटा मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा नै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको चर्चा गर्दै पूर्वमन्त्री भट्टले आफुले व्यक्तिगत रुपमा राजनीतिक दलहरूसंग पनि छलफल गरिरहेको बताए । उनले भने– सबै राजनीतिक दलहरूले एउटै धारणा बनाएर अगाडि बढ्दा सजिलो हुन्छ । हामी सबै मिलेर गेटा मेडिकल कलेज छिटोभन्दा छिटो सञ्चालनका लागि सरकारलाई दबाव दिनु पर्छ ।
‘प्रदेशको विकासका लागि यस प्रदेशका राजनीतिक दलहरूबिच संवाद भइरहेको छ’ उनले भने– हामी सबै राजनीतिक दल एकै ठाउ“मा बसेर एउटै धारणा बनाउछौं । अहिले प्रधानमन्त्री पनि यसै प्रदेशको भएकाले छिटोभन्दा छिटो यो कामलाई अघि बढाउन दबाब दिनेछौं ।
उनले प्रदेशको विकासका लागि प्रदेशका नेताहरूमा समन्वय, सहकार्य र छलफल नहुने गरेको तर्क नगर्न पनि आग्रह गरे । उनले भने– हामी (राजनीतिक दलहरू) निरन्तर संवादमा छौं ।
गेटा मेडिकल कलेज पूर्वाधार निर्माण समितिका अध्यक्ष डाक्टर चेतराज पन्तले भौतिक संरचना निर्माणको काम पुरा भएको बताए । ‘भौतिक संरचना निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगे पनि कुन मोडेलमासञ्चालन गर्ने ? भन्ने अझै पनि अन्योल कायम छ’ उनले भने– यस्तो अवस्थामा सरकारलाई दबाव दिनु आवश्यक छ ।
राजनीतिक दलहरूबीच गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मत्यैक्यता नहुदा पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाई भइरहेको सरोकारवालाहरूको तर्क छ ।
अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर गणेशबहादुर सिंहले गेटा मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त हुने बताए ।
नेपाल चिकित्सक संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष डाक्टर प्रदिप मिश्रले सेती प्रादेशिक अस्पताल नजिकै रहेको हुनाले नबाझिने गरी सेवा दिने तथा रिफरल अस्पतालको रुपमा विकास गर्नुपर्ने बताए ।
निर्माण समितिका कार्यकारी निर्देशक साउदले सरकारले आउ“दो पुससम्म सञ्चालनको मोडेल दिनै पर्ने बताए । उनले समितिको तर्फबाट पनि सरकारलाई छिट्टै मोडेल तयार गर्न दबाव दिने काम भइरहेको बताए । उनले पुस महिनासम्म पनि सरकारले सञ्चालन मोडेल दिन नसकेपछि आउ“दो वर्ष अस्पताल र पठनपाठन शुरु गर्न कठिन हुने बताए ।
उनले विश्वविद्यालयको रुपमा सञ्चालन गर्दा जनशक्ति पु¥याउन भने निकै चूनौतिपूर्ण हुने बताए । उनले देशका अन्य स्थानमा रहेका सबै मेडिकल कजेललाई त्यस अन्तरगत ल्याउन सके विश्वविद्यालय चलाउन पनि सम्भव हुनसक्ने बताए ।
यद्दपि, कुन मोडेलमा चलाउने भन्ने कुरा राजनीतिक विषय भएको हुनाले राजनीतिक सहमति र प्राविधिक पक्षले म्याच गर्ने मोडेलमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुने साउदले बताए । उनले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउ“दा जनशक्तिको कमी नहुने र आफ्नो निर्णय आफै गर्न सक्ने भएकाले तत्कालै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान चलाउ“दा उपयुक्त हुने बताए ।
शिक्षा र स्वास्थ्यको फरक मत
स्वास्थ्य क्षेत्रका अधिकारी, चिकित्सकहरूले मेडिकल कलेजलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनु उचित हुने सुझाव दिइरहेका छन् भने शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरू भने मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा अघि बढाउन उचित हुने औल्याइरहेका छन् ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर शेरबहादुर कमरले स्वास्थ्य क्षेत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्र्तगत चल्नुपर्ने भएकाले विश्वविद्यालय भन्दा पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
उनले भने– अहिलेसम्म जति पनि स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू छन्, सबैले राम्रो प्रतिफल दिएका छन् । केही प्रतिष्ठानमा नेतृत्वको कमजोरीका कारण बदनाम भएका छन् । गेटा मेडिकल कलेजलाई नमुनायोग्य स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाइनुपर्छ ।’
कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर पदमराज जोशीले मेडिकल कलेजलाई विश्वविद्यालयका रुपमा अघि बढाउन सुझाव दिए । उनले भने– नेपालमै अहिलेसम्म मेडिकल विश्वविद्यालय छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशबाटै देशकै पहिलो मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ ।’ उनले मेडिकललाई विश्व विद्यालय बनाए प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा मेडिकलका आंगिक विश्वविद्यालयहरू पनि संचालन हुने बताए ।
जसरी हुन्छ सञ्चालनमा ल्याइयोस– जनप्रतिनिधिहरू
‘मेरो नगरपालिका सुगम मानिन्छ, तर त्यहा नै अहिलेससम्म पनि एक जना चिकित्सक छैनन्’ गौरिगंगा नगरपालिका प्रमुख भीमबहादुर देउवाले भने– सरकारले करारमा पठाएका चिकित्सक दुईतीन महिनामै सरुवा भइहाल्छन् । हामीले हेल्थ अफिसरका भरमा स्वास्थ्य संस्था चलाउनु परेको छ ।
नगरप्रमुख देउवाले गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याए यी समस्या केही हदसम्म समाधान हुने बताए । ‘गेटा मेडिकल सञ्चालन भएको भए एक÷दुई सय विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गराई माग अनुसारका चिकित्सक उत्पादन गर्न सकिन्थ्यो’ उनले भने ।
गोदावरी नगरपालिका प्रमुख हरिसिंह साउ“दले आफुले पटक–पटक हरेक बैठकमा गेटा मेडिकल कलेजलाई सञ्चालन ल्याउनुपर्ने आवाज उठाइरहेको बताए ।
‘जसरी हुन्छ सञ्चालनमा ल्याउ“ भन्छौं । खै के कारण हो यसमा पनि राजनीतिक पक्ष हाबी भए जस्तो छ’ उनले भने– राजनीतिक दलहरू एकमत नभएसम्म गेटा मेडिकल सञ्चालनको परिकल्पना गर्न सकिदैन ।’ उनले यहि अवस्था भए अझ चार वर्षसम्म पनि मेडिकल कलेजमा अध्यापन शुरु हुन नसक्ने दाबी गरे ।
खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकास ?
गेटा मेडिकल कलेजको भौतिक संरचना निर्माण भइसकेको छ । तर, खानेपानी सेवा र फोहोरमैला व्यवस्थापन र ढल निकासको कार्य अघिबढेको छैन ।
कलेज सञ्चालनमा ल्याए पनि फोहोर व्यवस्थापन कहा“ गर्ने ? भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । हामी अस्पताल सञ्चालन गर्ने भनिरहेका छौं । तर, आवश्यक कुराको पहल नै भएको छैन’ सेती प्रादेशिक अस्पतालका पूर्व मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डाक्टर गणेशबहादुर सिंहले भने– खानेपानीको व्यवस्थापन र ढल निकासको पनि टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
कार्यक्रम कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुष्प कुवरको अध्यक्षतामा भएको थियो ।
कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रमेश धामी, गैसस महासंघका केन्द्रीय सचिव धर्मराज पाठक, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस स्ववीयू सभापति चुडामणी भट्ट, सेती प्रादेशिक अस्पतालका डाक्टर कविर गौतम, डाक्टर निरज अर्याल लगायतले गेटामा जति सक्यो चाडो अस्पताल सञ्चालन हुनुपर्ने सुझाव दिए ।